(trg)="1"> So Wutumi Twɛn ?
(trg)="2"> SO WUNIM bere dodow a nkurɔfo sɛe de twɛn kɛkɛ afe biara ?
(trg)="3"> Wɔtwɛn wɔ santen mu wɔ sotɔɔ ano , anaa baabi a wɔtɔn pɛtro .
(trg)="4"> Wɔtwɛn sɛ wɔbɛhwɛ wɔn wɔ adidibea .
(trg)="5"> Wɔtwɛn sɛ wobehu oduruyɛfo anaa ɛse ho ɔyaresafo .
(trg)="6"> Wɔtwɛn bɔs ne keteke ahorow .
(trg)="7"> Yiw , bere dodow a onipa sɛe no wɔ ne nkwa nna mu de twɛn sɛ nneɛma bɛkɔ so no yɛ nwonwa pii .
(trg)="8"> Sɛnea akontaabu bi kyerɛ no , Germanfo nkutoo hwere nnɔnhwerew ɔpepepem 4.7 afe biara de twɛn wɔ kar kwan so nkyereso mu !
(trg)="9"> Obi buu akontaa sɛ eyi bɛyɛ nnipa bɛyɛ 7,000 nkwa nna .
(trg)="10"> Twɛn a obi bɛtwɛn betumi ayɛ ade a ɛhaw adwene yiye .
(trg)="11"> Nnansa yi , ɛte sɛ nea bere nni hɔ mma biribiara , na nneɛma foforo a ɛsɛ sɛ yɛyɛ ho a yebesusuw nso betumi ayɛ sɔhwɛ kɛse .
(trg)="12"> Nhoma kyerɛwfo Alexander Rose kae bere bi sɛ : “ Nneɛma a ɛma asetra yɛ yaw no mu fã yɛ twɛn a yɛtwɛn . ”
(trg)="13"> Amerikani ɔmanyɛfo Benjamin Franklin kae sɛ twɛn a yɛtwɛn tumi ma yɛhwere ade .
(trg)="14"> Bɛboro mfirihyia 250 ni na ɔkae sɛ : “ Ɛbere yɛ sika . ”
(trg)="15"> Ɛno nti na nnwuma ahorow hwehwɛ akwan a wɔbɛfa so akwati akyirika a ɛho nhia bere a wɔreyɛ adwuma no .
(trg)="16"> Nneɛma pii a wɔde bere kakraa bi bɛyɛ no betumi ama wɔanya mfaso pii .
(trg)="17"> Nnwuma a wɔne ɔmanfo di tẽẽ no bɔ mmɔden sɛ wɔbɛma wɔayɛ nneɛma ntɛmntɛm — aduan a wowie no ntɛm , kar mu a wotumi tra yi sika wɔ sikakorabea , ne ade — efisɛ wonim sɛ sɛ adetɔfo ani begye wɔn ho a , ɛnsɛ sɛ wɔsɛe wɔn bere .
(trg)="18"> Yɛn Nkwa Nna a Yɛma Ɛsɛe
(trg)="19"> Afeha a ɛto so dunkron Amerikani anwensɛm kyerɛwfo Ralph Waldo Emerson nwiinwii bere bi sɛ : “ Hwɛ bere dodow a nnipa sɛe no de twɛn ! ”
(trg)="20"> Nnansa yi ara , nhoma kyerɛwfo Lance Morrow kaa anihaw ne ahoyeraw a ɛwɔ ɔtwɛn mu ho asɛm .
(trg)="21"> Afei ɔkaa “ anifere kwan so ahohia a ɛwɔ ɔtwɛn mu no ho asɛm . ”
(trg)="22"> Ɛyɛ dɛn ?
(trg)="23"> “ Nim a obi nim sɛ ne nkwa nna mu ade bi a ɛsom bo paa , ɛbere , reyera a ne nsa renka bio . ”
(trg)="24"> Ɛyɛ awerɛhow , nanso ɛyɛ nokwasɛm .
(trg)="25"> Obi nsa ntumi nka bere a ɔsɛe de twɛn biribi no bio da .
(trg)="26"> Nokwarem no , sɛ nkwa nna nyɛ tiaa saa a , anka twɛn a obi bɛtwɛn renhaw adwene pii saa .
(trg)="27"> Nanso nkwa nna yɛ tiaa .
(trg)="28"> Mfirihyia mpempem pii a atwam no , Bible mu dwontofo bi kae sɛ : “ Yɛn mfirihyiam nna , emu wɔ mfe aduɔson , na sɛ ɛboro so a , na ɛredu aduɔwɔtwe , na emu ahoahoade yɛ ɔbrɛ ne ahuhude , na etwam ntɛmso , na yetu kɔ . ”
(trg)="29"> Ɛmfa ho baabi a yɛte ne nnipa ko a yɛyɛ no , yɛn nkwa — nna , nnɔnhwerew , simma a ɛda yɛn anim fi bere a wɔwoo yɛn no — yɛ tiaa .
(trg)="30"> Nanso , yentumi nkwati tebea a ɛbɛma yɛasɛe bere a ehia yi bi de atwɛn tebea bi anaa nnipa .
(trg)="31"> Sua a Yebesua Sɛnea Wɔtwɛn
(trg)="32"> Yɛn mu pii atra kar bi mu a na ofirikafo no pɛ sɛ bere nyinaa ɔbɔ mmɔden sɛ obetwa kar a edi n’anim no ho .
(trg)="33"> Mpɛn pii no , ɛnyɛ ahiade titiriw biara ntia — ofirikafo no nni asɛyɛde bi a ɛsɛ sɛ odi ho dwuma ntɛm so .
(trg)="34"> Nanso , ɛyɛ den ma no sɛ ɔbɛma ofirikafo foforo agyigye no taataa .
(trg)="35"> Abotare a onni no kyerɛ sɛ onsuaa sɛnea wɔtwɛn .
(trg)="36"> Ade a wosua ?
(trg)="37"> Yiw , hu a yebehu sɛnea wɔtwɛn no yɛ biribi a ɛsɛ sɛ yesua .
(trg)="38"> Wɔmfa nwo obiara .
(trg)="39"> Sɛ ɔkɔm de nkokoaa anaasɛ biribi haw wɔn a , wɔpɛ sɛ wonya mmoa ntɛm ara .
(trg)="40"> Bere a wɔrenyin no nkutoo na ɛtɔ mmere bi a wɔte ase sɛ ɛsɛ sɛ wɔtwɛn ansa na wɔn nsa aka nea wɔhwehwɛ .
(trg)="41"> Nokwarem no , esiane sɛ yentumi nyi twɛn a yɛbɛtwɛn mfi yɛn asetram nti , hu a yebehu sɛnea yɛde boasetɔ twɛn bere a ɛho hia no bɛkyerɛ sɛ yɛn ho akokwaw .
(trg)="42"> Ɛwom , tebea horow bi wɔ hɔ a egye ntɛmpɛ a sɛ obi antumi antwɛn a ntease wom .
(trg)="43"> Okunu aberantewaa bi a ɔpɛ ntɛm de ne yere akɔ ayaresabea esiane sɛ ɔreyɛ awo wɔn ba foforo nti no betumi adi bem sɛ ɔnna boasetɔ adi .
(trg)="44"> Ná abɔfo a wɔrepiapia Lot atikɔ sɛ omfi Sodom no nsiesiee wɔn ho sɛ wɔbɛtwɛn bere a na Lot retwentwɛn ne nan ase no .
(trg)="45"> Ná ɔsɛe reba , na na Lot ne n’abusua nkwa da asiane mu .
(trg)="46"> Nanso , wɔ nsɛm pii mu no , sɛ wɔhyɛ nkurɔfo ma wɔtwɛn a , na ɛnyɛ sɛ nkwa da asiane mu ntia .
(trg)="47"> Wɔ nsɛm a ɛtete saa mu no , sɛ obiara resua sɛ ɔbɛtɔ ne bo ase a , nneɛma bɛkɔ yiye — ɛmfa ho sɛ ebia obi anyɛ n’adwuma yiye anaa ɔyɛɛ anibiannaso mpo no .
(trg)="48"> Bio nso , sɛ obiara sua sɛ ɔde bere a ɔde twɛn biribi no bɛyɛ biribi a mfaso wɔ so a , ɛbɛyɛ mmerɛw sɛ yɛbɛtwɛn .
(trg)="49"> Nyansahyɛ ahorow bi a ɛma wotumi twɛn san nya so mfaso mpo no wɔ adaka a ɛwɔ kratafa 5 no mu .
(trg)="50"> Yɛrentumi mmu yɛn ani ngu so sɛ obi a ne ho pere no no betumi ada ahantan honhom adi , su a ɛkyerɛ sɛ ne ho hia dodo sɛ wɔma ɔtwɛn .
(trg)="51"> Ɛfata sɛ wɔn a wɔte saa nyinaa susuw Bible mu nsɛm a edidi so yi ho : “ Boasetɔ honhom ye sen ahomaso honhom . ”
(trg)="52"> Dwae anaa ahantan yɛ sintɔ a anibere wom , na Bible mu abebusɛm bi ka sɛ : “ Koma mu kwasiarefo nyinaa yɛ [ Yehowa , NW ] akyide . ”
(trg)="53"> Enti boasetɔ a yebesua — sɛnea wɔtwɛn a yebesua — betumi ahwehwɛ sɛ yɛhwehwɛ yɛn ho mu ne yɛne afoforo ntam abusuabɔ mu yiye .
(trg)="54"> Wobenya Boasetɔ so Akatua
(trg)="55"> Sɛ yenim sɛ nea yɛretwɛn no fata , na sɛnea ɛte biara no ɛbɛba a , ɛntaa nyɛ den sɛ yɛbɛtwɛn .
(trg)="56"> Wɔ eyi mu no , eye sɛ yesusuw nokwasɛm a ɛyɛ sɛ Onyankopɔn nokware asomfo nyinaa retwɛn ne bɔhyɛ ahorow a ɛyɛ anigye a ɛwɔ Bible mu no mmamu ho .
(trg)="57"> Sɛ nhwɛso no , wɔka kyerɛ yɛn wɔ dwom a wofi honhom mu kyerɛwee no mu sɛ : “ Treneefo benya asase no adi , na wɔatra so daapem . ”
(trg)="58"> Ɔsomafo Yohane tii saa bɔhyɛ yi mu bere a ɔkae sɛ : “ Wiase ne n’akɔnnɔ retwam , na nea ɔyɛ ade a Onyankopɔn pɛ no tra hɔ daa . ”
(trg)="59"> Ɛda adi pefee sɛ , sɛ yɛretra ase daa a , anka twɛn a yɛbɛtwɛn no nyɛ ade kɛse biara .
(trg)="60"> Nanso mprempren yi , yenni asetra a enni awiei .
(trg)="61"> So ntease wom mpo sɛ yɛka daa nkwa ho asɛm ?
(trg)="62"> Ansa na yebebua no , hu sɛ Onyankopɔn bɔɔ yɛn awofo a wodi kan no a na wɔwɔ daa nkwa ho anidaso .
(trg)="63"> Ɛyɛ bɔne a wɔyɛe no nkutoo nti na wɔne wɔn mma nyinaa — a yɛka ho — hweree saa anidaso no .
(trg)="64"> Nanso , wɔn bɔne no akyi pɛɛ na Onyankopɔn daa n’atirimpɔw a ɔde bɛdan nea efii wɔn asoɔden mu bae ani , no adi .
(trg)="65"> Ɔhyɛɛ ‘ aseni ’ bi a na ɔbɛba , a ɔne Yesu Kristo , ho bɔ . — Genesis 3 : 15 ; Romafo 5 : 18 .
(trg)="66"> Sɛ ebia yebenya ne bɔhyɛ ahorow no mmamu mu mfaso sɛ ankorankoro no yɛ yɛn ankasa gyinaesi .
(trg)="67"> Saa a yɛbɛyɛ no gye boasetɔ .
(trg)="68"> Nea ɛbɛboa yɛn ma yɛasua saa boasetɔ yi no , Bible no hyɛ yɛn nkuran sɛ yensusuw okuafo nhwɛso no ho .
(trg)="69"> Ogu n’aba , na ɛsɛ sɛ ɔtɔ ne bo ase twɛn — yɛ nea obetumi biara de bɔ ne nnɔbae ho ban — kosi sɛ otwa bere bedu .
(trg)="70"> Ɛno ansa na obenya ne boasetɔ so akatua , na wadi ne nsa ano adwuma so aba .
(trg)="71"> Ɔsomafo Paulo ka boasetɔ ho nhwɛso foforo ho asɛm .
(trg)="72"> Ɔkae yɛn tete mmarima ne mmea gyidifo no .
(trg)="73"> Ná wɔrehwɛ Onyankopɔn atirimpɔw ahorow no mmamu kwan , nanso na ɛsɛ sɛ wɔtwɛn Onyankopɔn bere a wahyɛ .
(trg)="74"> Paulo hyɛ yɛn nkuran sɛ yensuasua eyinom a “ wɔnam gyidi ne abodwokyɛre so nyaa bɔhyɛ no . ” — Hebrifo 6 : 11 , 12 .
(trg)="75"> Yiw , ɔtwɛn yɛ ade a yentumi nkwati wɔ asetra mu .
(trg)="76"> Nanso ɛnsɛ sɛ ɛyɛ biribi a ɛteetee yɛn bere nyinaa .
(trg)="77"> Wɔ wɔn a wɔretwɛn Onyankopɔn atirimpɔw mmamu fam no , ebetumi ayɛ ade a ɛma wɔn ani gye .
(trg)="78"> Wobetumi de bere a wɔde twɛn no ne Onyankopɔn anya abusuabɔ a emu yɛ den na wɔayɛ nnwuma a ɛda wɔn gyidi adi .
(trg)="79"> Na ɛdenam mpaebɔ , adesua , ne nsusuwho so no , wobetumi anya ahotoso pintinn sɛ nea Onyankopɔn ahyɛ ho bɔ biara bɛbam wɔ ne bere a wahyɛ mu .
(trg)="80"> [ Adaka / Mfonini wɔ kratafa 5 ]
(trg)="81"> TEW ƐYAW A ƆTWƐN DE BA NO SO !
(trg)="82"> Yɛ nhyehyɛe to hɔ !
(trg)="83"> Sɛ wunim sɛ wobɛtwɛn a , siesie wo ho sɛ wobɛkenkan ade , akyerɛw ade , apam ade , anwene ade , anaa wobɛyɛ biribi foforo a mfaso wɔ so .
(trg)="84"> Fa bere no susuw nneɛma ho , biribi a ɛkɔ so yɛ den wɔ yɛn wiase yi a nneɛma kɔ ntɛmntɛm yi mu no .
(trg)="85"> Ma biribi a wubetumi akenkan mmɛn telefon na sɛ ɛba sɛ woretwɛn obi wɔ so a , woakenkan ; wubetumi akenkan nkratafa pii wɔ simma anum anaa du mu .
(trg)="86"> Sɛ woretwɛn wɔ kuw bi mu a , fa hokwan no di dwuma na sɛ ɛbɛyɛ yiye a , wo ne afoforo mfi nkɔmmɔbɔ ase ne wɔn nsusuw nneɛma a ɛma denhyɛ ho .
(trg)="87"> Fa nhoma ketewa bi a wɔkyerɛw mu anaa nea wubetumi akenkan hyɛ wo kar mu ma bere a ebia wobɛtwɛn mpofirim no .
(trg)="88"> Kata w’ani , gye w’ahome , anaa bɔ mpae .
(trg)="89"> TWƐN A WOTUMI TWƐN NO TAA GYINA SUBAN NE NNEƐMA A WOSUSUW HO TO HƆ SO .
(trg)="2"> “ Boasetɔ ne awerɛkyekye Nyankopɔn mma munnwen ade koro wɔ mo mu , sɛnea Kristo Yesu kwan te no . ” — ROMAFO 15 : 5 .
(trg)="3"> Ɔkwan bɛn so na obi suban betumi anya n’asetra so nkɛntɛnso ?
(trg)="4"> SUBAN wɔ asetra so nkɛntɛnso kɛse .
(trg)="5"> Anibiannaso anaa nsiyɛ , suban pa anaa subammɔne , nitan anaa biakoyɛ , anwiinwii anaa anisɔ yɛ suban ahorow a ebetumi anya sɛnea obi di tebea horow ho dwuma ne sɛnea nnipa foforo yɛ wɔn ade wɔ ne ho no so nkɛntɛnso kɛse .
(trg)="6"> Sɛ obi wɔ suban pa a , n’ani betumi agye wɔ tebea horow a emu yɛ den mpo mu .
(trg)="7"> Obi a ɔwɔ subammɔne fam no , biribiara nteɛ wɔ n’ani so bere mpo a — sɛ wɔde adwempa susuw ho a — asetra kɔ so yiye no .
(trg)="8"> Ɔkwan bɛn so na obi sua suban ahorow ?
(trg)="9"> Yebetumi asua suban ahorow — nea eye ne nea enye .
(trg)="10"> Nokwarem no , ɛyɛ ade a ɛsɛ sɛ yesua .
(trg)="11"> Bere a Collier’s Encyclopedia reka akokoaa a wɔawo no foforo ho asɛm no , ɛka sɛ : “ Ɛsɛ sɛ osua su ahorow a awiei koraa no obenya te sɛ nea ɛsɛ sɛ osua kasa anaa adwuma foforo biara ɔkwan bi so no . ”
(trg)="12"> Ɔkwan bɛn so na yesua suban ahorow ?
(trg)="13"> Bere a nneɛma pii na ɛma yenya no , nneɛma a atwa yɛn ho ahyia ne fekubɔ di mu akoten kɛse .
(trg)="14"> Nhoma a ɛka nneɛma pii ho nsɛm a yɛadi kan aka ho asɛm no ka sɛ : “ Ɛte sɛ nea yesua ade denam wɔn a yɛne wɔn bɔ fekuw paa no suban ahorow a yenya no so . ”